UGoogle ngoku vs siri vs cortana: ukubonakalisa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Google Ngoku vs Siri vs Cortana: ukuboniswa
I-Google Ngoku vs Siri vs Cortana: ukuboniswa
Ah, abancedisi ababonakalayo! Akukho mntu waziyo ukuba zisingise phi ezi zinto, kodwa okwangoku kufanele ukuba kucace gca ukuba ezona ndawo ziphambili zihambayo zijolise ekutyhaleni phambili umda kwinto eyakha enye indawo yedabi. Ngokunyanisekileyo, nangona kunjalo, ngelixa eli shishini lilonke lijongile kuGoogle ngoku kunye neApple & apos; s Siri ngalo lonke ixesha ukubona ukuba umntu uqhuba njani kwaye uthelekisa njani omnye nomnye, yiyo kuphela ngoku iMicrosoft ekugqibeleni kungene isithuba sokuba le nto iqala ukuziva ngathi luhlanga lokwenyani. Kodwa ngaphambi kokuba sithethe malunga nezinto ezithile kwaye sixoxe ngokuba isithathu ngasinye sisingise phi, kubalulekile ukuba siqonde kuqala ukuba ivelaphi.
Uninzi lwenu luya kucinga ukuba uSiri nguye esifanele siqale ngaye-ngapha koko, xa u-Apple wazisa umncedisi nge-iPhone 4S ngo-2011, yayiyeyokuqala ukwenza njalo, kwaye yayigcina loo nto okwexeshana. Kodwa inyani kukuba uSiri kunye noGoogle ngoku (waziswa ngo-2012), ngelixa iimveliso zobuchwephesha ezindala, ii-aren & apos; hayi amagqala apha, kuba iMicrosoft ibisenza ukudlala ngelizwi ngaphezulu kweminyaka elishumi ngoku. Ngokuqinisekileyo, ifom yokwahluka ngelo xesha, kodwa inyani kukuba inkampani ine (okanye kufanele ukuba nayo) amava ngakumbi kule niche kunokuba bobabini abakhuphisana nayo bethathiwe kunye.
Kwaye oku kubonisa ngeCortana, ethi, ngaphandle kwethegi yayo ye-BETA, iqulunqwe ukuba ibe yenye indlela enomdla, kwaye ngokukhawuleza. Ewe iMicrosoft ihambile indlela ende ukusukela oko le blooper yembali , ubuncinci ukugweba ngayo Iphefumlelwe Halo umncedisi obonakalayo ngoku oyinxalenye yeWindows Phone 8.1. Kutheni, nangona kunjalo, kwaye kuthekani ngabanye?
Yima, yintoni? Iinjini zokuqonda ilizwi
Ewe, ezo zizizo apho siza kuqala khona, kuba ucinga ukuba - ukuba umncedisi wakho akakwazi ukuqonda into oyithethayo ngenqanaba eliphezulu lempumelelo, unxunguphalo lodwa luya kukuqhubela ekubeni ulusebenzise kwaye uyijike ibe yimveliso engenamsebenzi. Njengoko kusenzeka, abathathu kuGoogle ngoku, uSiri, noCortana, bonke baziphethe kakuhle ngokwaneleyo ukukugcina ujikeleze, kodwa iiapos azizizo zonke ezilungileyo ngokulinganayo.
USiri unobunzima bokuqonda ukuba yintoni ebuzwayo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uSiri ngowona ulungileyo ... Ewe kunjalo, ngelixa injini yokuqonda eyilizwi iyapakisha intle darn elungileyo, kwaye iiapos ziqala ukushiyeka ngasemva kuGoogle ngoku kunye neCortana. Eyona nto imbi kakhulu, zombini uGoogle ngoku noCortana bazokulungisa izinto abazithatha njengezingaqondakali kubhabho kunokuba baphumelele, ngelixa uSiri ezakugcina nje oko ikucingayo & apos; ucinga 'utshilo, kwaye ungenzi ukuhlela nangona umbuzo ongenantsingiselo ngokucacileyo wenziwe . Oku kuthetha ukuba iApple & apos; umncedisi obonakalayo ngamanye amaxesha ushiyeka edidekile, ngelixa abo bakhuphisana nabo bekhawuleza ukukunika impendulo eyiyo.
Ngokukhula kukaSiri kugqatso lwamahashe (kolu luhlu), i & apos iphantsi kuGoogle ngoku kunye noCortana ukuyilwa. Umpu-entloko-yethu, asitsho ukuba uGoogle ngoku uyayiphumelela le, kodwa asizukuyikhanyela into yokuba uCortana ukufutshane. Isondele kakhulu.
Ke kwakhona, nokuba injini engenasiphoso yokwazisa ngezwi ayinamsebenzi ukuba umncedisi wedijithali ekuthethwa ngaye akalungiselelwanga ngokwaneleyo ukubonelela ngokwaneleyo ngoncedo kwi-ajenda yakho kwaye uphendule imibuzo yakho emininzi. Uyazi, uhlobo lwezinto ezenza iumncedisi. Kwaye, okuncinci ekufuneka ukwenzile, ngcono.
Olu didi oluthile, nangona kunjalo, lunzima kakhulu, kwaye kufanelekile ukuba uchaze ukuba loluphi na 'uncedo' olukule meko. Indlela esiyibona ngayo, umncedisi olungileyo kufuneka ahambe ngaphaya kwezinto ezisisiseko zokukwazi ukuseta i-aphoyintimenti, ukuvula iapp, okanye ukufowunela / ukubhala umyalezo wonxibelelwano. Ngokucacileyo, ezi ziyimfuneko, kodwa azinakho ukufumana impendulo eyandisiweyo kwimibuzo enje ngala 'Usuku lokuzimela', olwenza ukuba uGoogle ngoku angene kwimowudi yezembali, okanye akwazi ukufundisa uSiri ukubiza igama lakho ngokuchanekileyo . Iyanceda kakhulu ukuba umncedisi ekuthethwa ngaye angenza imisebenzi ngaphandle kokufuna naliphi na elinye igalelo ngaphandle kwelizwi lakho - kancinci ngendlela uSiri ayisingatha ngayo imisebenzi enjengokuseta izikhumbuzo, hayi kwaphela ukuba uGoogle ngoku uza kuwenza njani umsebenzi wokukrala ngaphakathi imeko efanayo, nokuba oko kukunika ulawulo ngakumbi.
Ngokukrakra, uSiri? Awungekhe uthethe malunga noMfanekiso oKhululekileyo ngaphandle kokuba umntu ukwingingqi exhaswayo?
Ngamanye amagama, umncedisi okwenyani ngoku kufuneka athethe kwaye aqonde ukuba incoko iya phi. Ngelishwa, ngelixa uSiri enamaxesha, ayinakuthelekiswa neGoogle Ngoku, engoyena mntu uncedisayo kwaba bathathu, kwaye ngendlela elungileyo. UCortana okwangoku uthule cwaka, kwaye uhlala enikezela ngolwazi kwaye uvumela amehlo akho enze lo msebenzi. Mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu, yiGoogle Ngoku kuphela exhasa imibuzo yokulandela. Oku kukuvumela ukuba ufumane ulwazi oluthe kratya, ngaphandle kokuchukumisa ifowuni. Umzekelo, ukuba uqala ubuze ukuba leliphi ikomkhulu laseJamani, emva koko ulandele nje umbuzo ngokulandelelana kwento ethi yeyabemi okanye yexesha okanye yemozulu apho, uGoogle ngoku uza kwazi ukuba wena neapos sisabhekisa eBerlin, IJamani kunye neapos; capital. USiri noCortana, kwelinye icala, phatha yonke imibuzo njengeziko elahlukileyo, ngaphandle kokuba uyakhubeka kwizinto esinokuzibiza ngokuba ziimeko esele zenziwe, o.k.t. izikhumbuzo, apho umphuhlisi afundise umncedisi ukuba abuze imibuzo eyi-X kunye no-Y ukuze enze umsebenzi. Ke uSiri noCortana bazakuza nemibuzo yokulandela xa ufuna ukuseta isikhumbuzi okanye utsalele umntu umnxeba, kodwa loo nto ayithelekiseki noko kuqhubeka uGoogle ngoku.
ICortana, kwelinye icala, inesiqwenga esihle sentsebenzo eyakhelwe-ngaphakathi: amandla okuseta izikhumbuzo ngexesha elizayo xa unxibelelana nabantu. Ke ukuba ufuna ukukhunjuzwa ukuba uvuyisane nomntu ngokunyuselwa umsebenzi kwixesha elizayo xa unxibelelana naye okanye unxibelelana naye, nokuba kungokutsala umnxeba okanye umyalezo, uCortana uya kuba lapho. Okwangoku, oku kuye kwahluka kuye, kwaye yona iluncedo olukhulu.
Okokugqibela, kodwa ngokuqinisekileyo ubuncinci, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uGoogle ngoku okwangoku kuphela komncedisi onokuthi umfowunele ngokuthi 'Kulungile, uGoogle' ngeli lixa wena kunye neapos; sikwisikrini sasekhaya sezona ndawo zininzi zakutshanje. USiri uzakufumana inkxaso-yokumamela rhoqo kwi-iOS 8- kuphela ukuba wena kunye neapos ngaphakathi kwesinxibelelanisi sikaSiri okanye ubotshelelwe kwindawo yokuphuma, nangona kunjalo kude kube ngoku kuya kufuneka ucofe iqhosha laseKhaya ixesha elide ukumbiza, okanye wenze inqaku elithi 'Nyusa ukuze uthethe' ukuze uSiri aqale nanini na xa utsala i-iPhone yakho uyibeke endlebeni. Okwangoku, uCortana afikeleleka kuphela ngokucinezela iqhosha lokukhangela kwizixhobo ezisekwe kwiWindows Phone 8.1.
Ewe kunjalo, umda wemibuzo exhaswayo (kunye neentlobo zeziphumo ezihanjisiweyo) nayo iyahluka, kwaye yinto ebalulekileyo xa uthatha isigqibo ngoncedo lwe-trio & apos.
Ngokubanzi, uGoogle ngoku ungaphambili, kwaye kunqabile ukuba athotywe ngumbuzo wakho. Ingachaza amagama nezinto, iyazi ukubhukisha kwakho, inikezela ngedatha yenqwelomoya, kwaye iya kukunika ukujonga indlela iqela lezemidlalo olithandayo eliqhuba ngayo. Iza kuthi kwakhona ikuxelele malunga neempawu ezibalulekileyo zomhlaba ukuba ubuziwe, yiphule idatha yokutya njengeekhalori, iikhabhoh, kunye neetyiwa, kwaye ucengceleze umdlalo wefilimu oyithandayo okanye umboniso weTV kunye nengoma yomxholo. Ukunyaniseka, uSiri noCortana abaphumelelanga kwaye abakuphoxi ukuba ubuzwa ngokufanayo, ayikuko nje ukuba abenzi umsebenzi omkhulu ngokoluvo lwethu, njengoko, xa kuthelekiswa, iimpendulo zabo zihlala zingenabunzulu kwaye kuya kuhlala kunjalo Uzifundela olu lwazi (ngakumbi uCortana), ngokungathi wenza iiapos kwakhona ukwenza uphando oluqhelekileyo.
UGoogle ngoku kunye noSiri banika itafile eluncedo, ngelixa uCortana ebonisa ukukhangela kwe-Bing. Kwaye ayisiyonto ilungileyo.
Ewe kunjalo, indlela ulwazi olunikwa ngayo ibaluleke kakhulu, ngakumbi kuba uninzi lwemibuzo iya kuthi ngokuqinisekileyo ixhokonxe isishwankathelo sempendulo ethethiweyo, kodwa ikwabonelele ngesishwankathelo sokujonga (rhoqo itafile (iSiri) okanye umfanekiso ohamba nayo. Ngoku / Cortana)). Ngoku uGoogle ngoku uhlala ekubonelela ngolawulo ngakumbi ngendlela oqhubeka ngayo xa uthelekisa noCortana noSiri, ke ukuba ubuza malunga noMfanekiso weNkululeko, wena kunye neapos; uya kufumana iindlela ezimfutshane zokuhamba, ufowunele ulwazi, kunye nomhlaba kunye neepos; iwebhusayithi. IGoogle ngoku ikwavuleleke kakhulu kwimibuzo evela kwihlabathi liphela, ngelixa uSiri engavumi ukuxhasa ukubulawa kwemibuzo ukuba ayinayo inkxaso yommandla, kubandakanya nezo zinganiki nkxaso. yendawo. Ugh!
Apho ilahleko ngoku kaGoogle, ixesha elikhulu
Umfanekiso:1ye9Ke ukuba akukho kwanto uyaziyo malunga naba bancedisi bangasentla, umbono wakho ukuza kuthi ga ngoku kuya kwenzeka ukuba uGoogle ngoku akhokele kwabanye. Ngelixa ii & apos; sngokubanzikuyinyani, uGoogle ngoku uphulukana nodidi olunye ngoku: ukuba nomphefumlo kunye nokonwaba.
Ngokufanelekileyo, uGoogle ngoku ngowona mncedisi ungathandekiyo kwezi zintathu, njengoko kuhlala kunjalo ukuya kwinqanaba. Kwaye kufana nalaa mntu unaye osebenza ngathi ubonakala emalunga nomsebenzi, kwaye akukho namnye owonwabisayo. Ayothusi le nto, nangona kunjalo, njengoko kucacile ukuba ezi nkampani zintathu zinombono woluhlu oluselulutsha ngokwahlukileyo.
Ukucacisa ngakumbi, kubonakala ngathi iApple kunye neMicrosoft ziyavuma ukuba ukuze umncedisi obonakalayo aphumelele, akufuneki ukuba ibe yirobhothi ethathelwa ingqalelo yimisebenzi, kodwa iqabane elingakumbi eliza kukwazi kwaye mhlawumbi 'lifumane' ngelixa elizayo. Umzekelo, ubusazi ukuba uCortana unakhocula? Injalo loo nto, kwaye uya kukuculela ingoma. Kwaye, njengoko kukhankanyiwe, uSiri uya kufunda ukubiza ngcono igama lakho, kwaye uyazi nomhla wokuzalwa kwakho. Bobabini baya kukuxelela ukuba bayakuthanda kakhulu xa bebuzwa, kwaye bade bakuxelele ihlaya xa uziva uluhlaza okwesibhakabhaka, okanye ukujika xa usenza okungaphephekiyo okungafanelekanga (kwaye okungaqhelekanga) kuqhubeke kubo. Akukho nanye kwezi eya kusebenza noGoogle ngoku, eya kuthi yenza ukukhangela kwiwebhu kwaye ikunike ukujonga okungenanto.
Kunzima ukuchaza ngokuqinisekileyo ukuba ngabaphi aba bancedisi bathathu bakhawulezayo, xa ubathelekisa ngokuthe ngqo ngamanye amaxesha unokuziva ngathi uthelekisa ii-apile kunye neeorenji. Bayafana, kodwa ayifani.
Esona sizathu siphambili soku kukuba uGoogle, iApple, kunye neMicrosoft, bonke bacwangcise abancedisi babo ngokwahlukeneyo, ke abaxhasi kwaye abasoloko bekhupha uhlobo olufanayo lolwazi. Ngamanye amagama, uGoogle ngoku uhlala ebonelela ngezona mpendulo zichanekileyo, ngelixa uCortana ehlala enikezela okuncinci. I-Apple ikindawo ethile embindini, kwaye ihlala ibopha kunye nezinye ezimbini ngokuxhomekeke kumbuzo.
Konke okutshiwo, kuyinyani ngokubanzi ukuba uGoogle ngoku uyakhawuleza kuneSiri, ethi yona ikhawuleze kuneCortana. Kwitheyibhile engezantsi, sichaze isantya esichaziweyo njengoko kuthatha ixesha kwaba bathathu ukuqonda into oyithethayo, buza iseva oyisebenzisayo ngasemva, kwaye akunzisele iziphumo. Njengoko ubona, nangona kunjalo, umahluko uwonke umncinci kakhulu.
Ngoku, ngelixa uCortana efikile okokugqibela, kufuneka sitsho ukuba sizive sinobubele ngakumbi kuyo-ngokuqinisekileyo, iMicrosoft inamava kule ndawo, kodwa ziyinyani ukuba uCortana usesemthethweni kwi-BETA kwaye ifumaneka kuphela e-US. Oku, ngaphezulu kokunokwenzeka, kuthetha ukuba iMicrosoft okwangoku ayilinganisi amandla ayo okuqhubekeka kwamaseva, ke isantya seCortana kunye neapos siyanelisa okwangoku. Ndiyathemba ukuba izakubangcono.
Isiphelo kunye nokulindelweyo
Ukuqukumbela, kuye kwehle eyona nto uyifunayo kunye neapos xa kusiza kubancedisi ababonakalayo. Ukuba awunangqondo-undinike-i-nyani uhlobo lwesimo sengqondo, ke wena kunye neapos, kunokwenzeka ukuba sihambe nathi xa sisithi iGoogle ngoku yeyona ilungileyo ngoku, ubuncinci xa kuziwa kukubonelela iimpendulo ozifunayo, kwaye ngokukhawuleza. Yintoni engaphezulu, iGoogle ngoku isebenza ngakumbi kunezinye, kwaye inika ukuqonda kunye noncedo nokuba awusebenzisani nayo nangayiphi na indlela.
Isizathu esikhulu soko kukuba uGoogle uyincutshe ekukhangelo, kwaye unomdla ocacileyo wokutyhala uGoogle ngoku kude ngakumbi, ngakumbi ngoku ukuba i-Android Wear yinyani yokuba inkampani ibonakala ngathi ijonge ukuxhasa kakuhle. Ewe kunjalo, ukuba kukho nabani na omele ukuphumelela ekubeni abe nomncedi opholileyo, onolwazi ngokomxholo okwangoku, yiGoogle's apos.
Ngokubhekisele kuSiri, ngelixa iphantsi kwiGoogle Ngokuemngxunyeni, umntu akanakuphika ukuba iApple inendlela yokwenza izinto ngendlela enomtsalane, kwaye umncedisi wayo ngumzekelo olungileyo. Ngokungafaniyo noGoogle ngoku, kuvakala ngathi uSiri unomphefumlo. Ngelishwa, kwaye ngelixa iApple ingakhange iyishiye le projekthi, ivakalelwa ngathi iSiri ayisiyo & apos; ayisiyonto iphambili kuCupertino okwangoku
Ukuthetha ngobuntu, asinakho ukulibala uCortana, nokuba. Uyakwazi ukucula, ngapha koko! Ngokuqinisekileyo, loo nto inencasa ngakumbi kunayo nayiphi na enye into, kodwa ibonisa umendo owenziwe nguMicrosoft kunye nomncedisi wakhe oqinileyo. Siyaqonda ukuba uCortana usenaso isibheno 'esitsha' kunjalo, kodwa, ngokuphandle, asinakukunceda kodwa sonwabe kakhulu yile nto iMicrosoft imgcinele yona. Sisiphelo esinye seqhekeza lekhowudi le-BETA eliqinileyo, ezo ziqinisekile.
Ekugqibeleni, nangona kunjalo, inyani kukuba aba bancedisi basengqwalaselo encinci kakhulu xa kuziwa kwinto eqhubela abathengi kule ndawo okanye lelo qonga. Kancinci njengokunxiba okwangoku, aba bancedisi bancinci basaqhubeka nomsebenzi, ke isibhakabhaka ngumda. Abagxeki phakathi kwethu, nangona kunjalo, banokuthatha imeko yabo yangoku yokuba ngaphezulu kancinci ngakumbi kwiinjini zokukhangela ezikrelekrele njengophawu lobuthathaka kuyo yonke iparadigm, kwaye kunzima kwaye ukuphikisana nayo ngoku. Kodwa, ke, kuye ngamnye kubo, akunjalo?
I-iphone 6s kunye ne-lg g4
I-OnePlus 9 Pro vs OnePlus 8 Pro vs OnePlus 7 Pro: Ukuthelekiswa kwekhamera
I-Samsung Galaxy S21 Ultra vs Galaxy Qaphela 20 Ultra
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Umdlalo weselula wabazingeli utyhiliwe, uza kwi-Android kunye ne-iOS ngo-2021
Abasebenzisi bakaWhatsApp kungekudala bazokwazi ukuhambisa umlando wengxoxo phakathi kwe-iPhone kunye ne-Android
Ke, ucinga ukuba i-Galaxy S9 iyabiza? Jonga i-UK, iJamani, i-Itali okanye i-China amaxabiso!
Eyona miSebenzi yeNtloko yoMsombuluko engenazingcingo